Download Battle warship Naval Empire- APK Battle warship
1.3.7.6 for Android
၂၀၁၈ ရဲ အဟော့ဆုံ့း စစ်ပွဲဂိမ်းကိုကစားလို့ ရနေပါပီ။အကောင်းဆုံး 3D သက်ရောက်ထားသောနည်းဗျူဟာဂိမ်းတွင် မလွှမ်းမိုးနိုင်သောရေတပ်သင်္ဘောအစုများ၏ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်လိုက်ပါ။သင့်ရေတပ်ကိုတည်ဆောက်ပီး ပြင်းထန်သောပင်လယ်တိုက်ပွဲများစွာသို့ အားကောင်းသောရေတပ်အစုကိုဦးဆောင်ပါ။သူငယ်ချင်းများနဲ့ ရှေ့ တိုးပူးပေါင်းခြ င်းဖြင့် အားကောင်းအောင်ပျိုးထောင်ပီး အင်ပါယာတစ်ခုအတူတကွတည်ထောင်ပါ။ပင်လယ်ဓါးပြများ၊ ပင်လယ်မွန်းစတားများနဲ့နိုင်ငံအနှံ့မှကစားသမားများနဲ့ လုပ်အားခ စစ်ပွဲရှိပါသည်။မိုဘိုင်း MMO တွင် ကမာ့ သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းအတွက်အားတင်းထားပါ
့သမုဒရာလှိုင်းဝါးမျိုမှုကြောင့် ကမာပျက်လုနီးပါးအခြေအနေကိုဝင်ပီး ပင်လယ်ဓါးပြများကို ထမြောက်အောင်မြင်လိုက်ပါ။စစ်ပွဲတွင်သင့်ရန်သူများကိုဖျက်ဆီးပစ်ရန် တိုက်သင်္ဘော။ဖျက်သင်္ဘော၊လေယာဥ်တို့ကိုအမိန့် ပေးပါ။ဘာမျူ ဒါတွင် တော်ဝင်အစစ် MMO တိ်ုက်ပွဲအတွက် ဘာလို့မပူးပေါင်းရတော့ မှာလဲ။ပင်လယ်ဓါးပြများနဲ့မွန်းစတားများကို သင်တွေ့ နိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအမဲလိုက်ပါ။ကျယ်ပြန့်သောပင်လယ်များဟာ သင့်အတွက်ပါပဲ။
သင့်စစ်သင်္ဘောစုအင်အားနဲ့ ဋ္ဌာနချုပ်အရွယ်အစားရှိသလောက် သင့်နည်းဗျူ ဟာများရှိသော စစ်ပွဲဂိမ်းအသစ် ရှိနေပါပီ။ဂိမ်းပြိုင်ပွဲများက သင့်ကိုအတော်ဆုံးရေတပ်မှုး ဖြစ်စေမှာပါ။စိုးမိုးခြယ်လှယ်ရန် စစ်ပွဲအပေါ်စစူးရှသောမျက်စိ သင်ရှိရပါမည်၊သင့်ရေတပ်ကို ရန်သူ့ သဘော်များအခက်တွေ့၇န်ထောက်လှမ်းရန် အမိန့် ချမျတ်ပါ။
ဋ္ဌာနချုပ် – ကိုယ်ပိုင်ရေတပ်ကို တည်ဆောက်ပါ
သယ်ဆောင်ပေးသူ- အမျိုးအစား ၁၀၀ ကျော် သယ်ဆောင်ပေးသူများ
လေယာဉ်- ၂၀၀ ဟယ်လီကော်ပတာ။ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ
ဖျက်သဘောင်္၊ခရူဇာစစ်သဘောင်္ တစ်ခုစီအတွက် သီးသန့်ပါဖောမန်စ်
2. အားအကောင်းဆုံးရေတပ်ကို တည်ဆောက်ပါ
Carrier : သယ်ဆောင်သူများကို အားကောင်းဆုံးရေတပ်ဖြစ်အောင် တိုးမြှင့်ပါ
လေယာဉ် – လေယာဉ်များကိုအဆင့်မြင့်ပါ
စစ်ပွဲ – စစ်ထိုးမှုဖြင့် ပိုကောင်းသောစစ်ပွဲများကို လော့ ဖွင့်ပါ
နည်းပညာ- သာလွန်သောပါဝါများဖြင့် သင့်တပ်မှုးကိုထောက်ပံ့ပါ
3. အနိုင်မယူနိုင်သောပူးပေါင်းခြင်းဖန်တီးပီး ကမာကိုစိုးမိုးပါ
အသင်းဝင်များမှ အကူအညီရနိုင်သူရဲ့ နေရာကို ပူးပေါင်းပီး ဈေးကြီးသောလက်ဆောင်များကိုလက်ခံလိုက်ပါ
ပူးပေါင်းမှုမှာပါဝင်ပီး တပ်မှုးဖြစ်အောင် သင့် rank မြှင့်ပါ
ဆာဗာစစ်ပွဲဖြတ်ပီး ကစားသူအားလုံးက အမြင့်ဆုံးဆုတံဆိပ်အတွက် တိုက်ခိုက်ကြပါသည်
4. ဂလိုဘယ်တပ်မှုးများနှင့် ကစားပါ
ကမာအနှံ့ မှ ကစားသမားမီလီယမ်ပေါင်းများစွာဖြင့်ကစားပါ
စကားပြန်စာရိုက်နှင့် အီမိုဂျိ ရနိုင်ပါသည်
သင့် ဇာတ်ကောင် အထူးပြုလုပ်ပါ
သင့်နိုင်ငံအလံကိုေ၇ွးပီး ကျူးကျော်သူများကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်လိုက်ပါ
5.အကောင်းဆုံးရေတပ်ဗျူ ဟာဂိမ်း
ဆုကြေးများရရန် နည်းစနစ်များစွာဖြင့် ပင်လယ်ဓါးပြများကို အနိုင်ယူပါ
ပိုမြင့်သောဆုကြေးများအတွက် အသင်းဝင်များနဲ့ပူးပေါင်းပီး မွန်းစတားများကို အနိုင်ယူပါ
များပြားသော PVP & GvG war အရင်းမြစ်များကို လုယူဖျက်ဆီးပါ
တစ်နေ့၃ ကြိမ် ဘော့ စ် နဲ့ ယှဉ်ပါ
6.မကုန်နိုင်သော ဂိမ်းအတွေ့ အကြုံ
ကမာပျက်လုနီးပါး ပင်လယ်ကို ကောင်းမွန်သော 3D ဂ၇ပ်ဖစ်ဖြင့် ထူးခြားပါတယ် ။
ကမာ့ မြေပုံတွင် ကြီးကျယ်သောလုပ်အားစစ်
24/7 သင့်ကို နိုးကြားစေပါတယ်။
The hottest free to play multiplayer war game of 2018 is here! Become an admiral of invincible navy fleets in the best 3D interactive strategy game of naval warfare. Build your naval base and lead your powerful fleet into countless epic sea battles. Grow stronger by forging alliances with friends and build an empire together.
Wage war against pirates, sea monsters, and players from around the globe! Fighting for world domination now inamobile MMO!
ရှာတှေ့ checker myanmar, Shan koe mee, Show, Strategy Games, အကျရှငျ, အာကိတျ